HomeTORKIAFaritra atsinanan'i Anatolia25 ErzurumNy fandaharana Palandöken dia mivelatra amin'ny fanentanana ara-panatanjahantena
13 / 01 / 2020 25 Erzurum, Faritra atsinanan'i Anatolia, ANKAPOBENY, TORKIA, TELPHER
festival festival dia mahasarika mpankafy ny fanatanjahantena
Ny Festival Palandöken, nokarakarain'ny Kaominaly Metropolitan Erzurum ao amin'ny Palandöken Ski Center, dia safotry ny mpankafy fanatanjahan-tena.
Ny fanjonoana ranomandry, fihinanana bisikileta, sary sokitra ranomandry ary hetsika maro hafa amin'ny fanombanana ny festival, anisan'izany ny Ben'ny tanànan'i Erzurum Metropolitan Munmet Sekmen, "feno hetsika miloko feno sy feno miaraka amin'ny fetin'ny fizahan-tany fizahan-tany sy fanatanjahan-tena amin'ny ririnina amin'ny rivotra," hoy izy. 5-10 Raha nilaza izy ireo fa tompon'andraikitra amin'ny filalaovana ski na tendrombohitra an-tendrombohitra dia hatao any Palandöken hatramin'ny XNUMX-XNUMX taona lasa izay, tsy hisy hino. Satria rehefa tonga any Palandöken dia tonga ao an-tsaina ny fanaovana ski ao anatin'izany fotoana izany, hoy i Başkan hoy ny filoha Sekmen.
Pal Izahay dia nahazo toy izany sy kalitao toy izany tamin'i Palandöken tao anatin'ny 6 taona lasa hatramin'ny niorenanay; Rehefa tonga eo amin'ny Palandöken, na dia ny loharano adrenalinina aza dia tonga ao an-tsaina. Satria nitondra vina vaovao amin'ny fizahan-tany ririnina tany Erzurum izahay; tsy vitan'ny fizahan-tany misy ny fizahan-tany amin'ny fialam-boly fotsiny izahay fa koa mampiditra azy amin'ny fanatanjahantena ririnina. Raha ny marina, miaraka amin'ireo fikambanana nasionaly sy iraisam-pirenena izay nampiantrano anay ao Erzurum, dia mamorona fanentanana ankapobeny momba an'i Palandöken sy Erzurum isika. Satria ny kanto lehibe indrindra amin'ny fizahan-tany dia ny hatsarana sy ny fiderana an'i Palandöken. Misy tontolo iainana ao Palandöken izay manome fotoana ho an'ny fanatanjahantena voajanahary sy adrenalinina, ary hampiala io hery io amin'ny fialan'i Allah izahay. Raha mametraka tanjona ny ‘1 tapitrisa ny mpizahatany’ eo anoloan’i Erzurum; manombatombana ireo mety ho tombony vokatr'izany izahay. Manohy handroso miaraka amin 'ny dingana hentitra manoloana izany tanjona izany. "Mandritra izany fotoana izany, matihanina mpianika, naorina Palandöken Ski sy Torkia voalohany ranomandry solon-zava-dehibe rehefa niakatra manda natao amin'ny Ice Park.
Fanatanjahantena, adrenalinina, fialam-boly amin'ny Snow Valley Palandöken Ski Resort
Coach Sports Fest Palandöken Nanomboka ny lalao Winter
Ireo mpizahatany Iraniana dia mitsidika ny Paladoken Ski Resort
Akçaray, Mpianatra nirohotra
Ny National Skier Crashes any amin'ny Centre Ski Centre Palandoken
Fialantsasatry ny taom-baovao ho any Skandinavia Palandoken
Toeram-pisakafoanana ho an'ny toeram-ponenan'ny Palandoken Ski
NG Afyon Fanatanjahantena sy môtô
Olympos Teleferik naneno ny mpitsidika
Tendrombohitra Erciyes nirohotra nankany amin'ny mpilalao ski nandritra ny semester Break
Ny Centre Ski Centre Abalı dia nirohotra nankany amin'ny Vanl izay tia ski
Bayramt Boztepe Ropeway nadinin'ny mpandeha
Ny Ski Center Nemrut dia nirohondrohon-tsoan'ny mpilalao ski
Nalaza ny Ski Center Elmadağ nandritra ny fankalazana ny taom-baovao
Ski mpitaingina bisikilety
sary sokitra ranomandry
Fifaninanana bisikileta tao Palandöken ranomandry
Ny fanjonoana ranomandry